‘प्रेम गर्न दिवस चाहिँदैन’ - News Portal from Nepal
‘प्रेम गर्न दिवस चाहिँदैन’
प्रेम के हो तपाईंको विचारमा ?
-प्रेम र जिन्दगीको परिभाषा खोज्ने र दिने सबै मूर्ख लाग्छन् । यी भनेका परिभाषा खोज्ने हैन भोग्ने कुरा हुन । यी परिवर्तनशील छन् । मूर्ख नबनौँ बस भोगौँ ।
पहिलो प्रेमको संस्मरण सुनाउनुस् न ।
-प्रेम के हो भन्ने कुरा नै हरेकको अनुभव र बुझाइमा फरक पर्छ । केटाकेटी बीचको प्रेमको कुरा गर्ने हो भने ९ कक्षा पढ्दा साथी हुनुहुन्थ्यो । जोसँग भावनात्मक रूपले जोडिएको थिएँ । पत्र आदानप्रदानबाट हामी प्रेम गथ्र्यौं । हामीलाई कुनै दिवस चाँहिदैन थियो । हरेक महसुस प्रेमका सगर र सागर थिए । उचाइ र गहिराइ आफैँमा महसुस हुन्थे । सबैभन्दा नजिक भएको पल उनी मेरो साइकलको क्यारिएरमा बसेकी थिइन् । अहिलेसम्म त्यो जति पवित्र र गहिरो प्रेम कुनै महसुस भएन ।
स्थिर केही छैन संसारमा । हामी सृष्टिको सानो एक प्रजाति, हामी भित्रको भावना नै स्थिर छैन । तसर्थ विचार, आस्था, विश्वास, प्रेम, माया सबै परिवर्तनशील हुन्छन । मेरो त्यो प्रेमभाव पनि सायद त्यसैगरि परिवर्तन भयो ।
प्रेम दिवसको अवसरमा के–कस्ता चहलपहल देख्नुभएको छ ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
-अरुको चहलपहलको मलाई के मतलब । जे सुकै होस्; जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो । म भन्छु– बस अरुलाई दुःख नदेऊ, चित्त नदुखाइ बाँकी आफ्नो मर्जीमा बाँच ।
मेरो लागि त म छु र ब्रह्माण्ड छ । म छु र मेरा वरपर मान्छेहरू छन् । म छु र मेरो लागि हावा चल्छ । म छु र नै म भित्र सपना र कल्पनाहरू छन् । सबैसँगको सामिप्यता छ, आत्मियता छ । तसर्थ म पहिले म आफैँलाई प्रेम गरेर सबैलाई बाँड्न हिडेको छु ।
प्रेम विशेष तपाईंको गीत संगीतमा सबैभन्दा गज्जब कुन लाग्छ ? त्यसबारे बताइदिनुस् न ।
-मलाई नारायण गोपालले गाउनु भएको ‘ए मलाई माया गर्छु भन्ने हजुर’ भन्ने गीत असाध्यै मन पर्छ ।
प्रेम जीवनका भावी योजना बारे सुनाउनुस् न ।
-प्रेम दिवस या नानाभाँती डे अनि योजनाहरू मलाई मानसिक, स्वघोसित संभ्रान्त वर्गहरूको ‘मेटेरियलिस्टिक शो अफ’ लाग्छ । कुनै दिनले प्रेमलाई केही गर्दैन । प्रेम प्रेम हो; अनवरत चलिरहन्छ ।